နောက်လူရင်ခွင်ကနေ ရက်စက်ခဲ့တဲ့ သရဲနီတပ်သားဟောင်းကြီး – Sport Gaber
ချစ်သူဟောင်းက ကိုယ်အပေါ် ရက်စက်နေရင် လူတိုင်းခံစားပေါက်ကွဲရမှာ အမှန်ပါ။ အဲ့လိုအချစ်တေက အမုန်းတေအဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားတတ်ကြပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ PSGအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ သရဲနီတပ်သားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟာရဲရားရယ့် အိုဗာတင်းဖြစ်လွန်းတဲ့ အိုက်တင်တွေက ယူနိုက်တက်ချစ်သူတေ အသဲနာစေခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရယ့် အိုက်တင်ကောင်းမှုတေက ယူနိုက်တက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တေဟာ တစ်ခါ သရဲနီဘူးရင် ထာ၀ရ သရဲနီဘဲ ဆိုတာလက်ကိုင်ထားတဲ့အတိုင်း အသင်းကစားသမားကော တခြားပြောင်းတဲ့သူတေကိုကော ချစ်စမြဲပါ။
ဟာရဲရား ယူနိုက်တက်မှာရှိစဉ်အခါက သူ့ရယ့်ပေးဆပ်မှု ကြိုးစားမှုတေက ပရိတ်သတ်‌တွေရယ့် ရင်ထဲမှာရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ယူနိုက်တက်မှာရှိခဲ့တာ ငါးနှစ်ပါ။ ငါးနှစ်အတွင်းက သူ့ရယ့် ယူနိုက်တက်ချစ်စိတ်တွေ ကြိုးစားပေးဆပ်မှုတွေကြောင့် ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရယ့်အချစ်တေက PSGနဲ့ပွဲမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ အို့ထရတ်ဖိုဒ်ကို ပြန်လာရတာ ပျော်တယ်တွေ ၀မ်းသာပါတယ်တွေ ပြောခဲ့ပေမယ့် ကွင်းအတွင်း သူ့ရယ့်လုပ်ရက်က စိတ်တိုစရာပါ။ နည်းပြဆိုးရှားလ်ကတော့ ဟာရဲရားတစ်ယောက် သူကိုသူ သိမှာပါ ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ ယူနိုက်တက်ကနေ PSGကို ဟာရဲယားထက်အရင် ပြောင်းရွေ့သွားတဲ့ နောင်တော်ကြီး ဒီမာရီယာ လမ်းစဉ်တောင် လိုက်နေတာလား လို့ မေးခွန်းထုတ်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမာရီယာကတော့ ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တေရယ့် အမုန်းကို ခံယူထားသူကြီးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဟာရဲယားဟာ ယူနိုက်တက်မှာရှိစဉ်က ကြိုးစားပေးဆပ်မှုတွေက အသ်အမှတ်ပြုရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟာရဲယားတစ်ယောက် PSGအသင်းမှာ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ ဆုတောင်းရင်း။…….
ခစြျသူဟောငျးက ကိုယျအပေါျ ရကျစကျနရေငျ လူတိုငျးခံစားပေါကျကှဲရမှာ အမှနျပါ။ အဲ့လိုအခစြျတကေ အမုနျးတအေဖွဈပွောငျးလဲ သှားတတျကွပါတယျ။ ယူနိုကျတကျတို့ PSGအသငျးကို ရှုံးနိမ့ျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ သရဲနီတပျသားဟောငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဟာရဲရားရယ့ျ အိုဗာတငျးဖွဈလှနျးတဲ့ အိုကျတငျတှကေ ယူနိုကျတကျခစြျသူတေ အသဲနာစခေဲ့ပါတယျ။
သူ့ရယ့ျ အိုကျတငျကောငျးမှုတကေ ယူနိုကျတကျအရှုံးပေါျခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျပါ။ ကြှနျတောျတို့ ယူနိုကျတကျပရိတျသတျတဟော တဈခါ သရဲနီဘူးရငျ ထာဝရ သရဲနီဘဲ ဆိုတာလကျကိုငျထားတဲ့အတိုငျး အသငျးကစားသမားကော တခွားပွောငျးတဲ့သူတကေိုကော ခစြျစမွဲပါ။
ဟာရဲရား ယူနိုကျတကျမှာရှိစဉျအခါက သူ့ရယ့ျပေးဆပျမှု ကွိုးစားမှုတကေ ပရိတျသတျ‌တှရေယျ့ ရငျထဲမှာရှိစမွဲဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ယူနိုကျတကျမှာရှိခဲ့တာ ငါးနှဈပါ။ ငါးနှဈအတှငျးက သူ့ရယ့ျ ယူနိုကျတကျခစြျစိတျတှေ ကွိုးစားပေးဆပျမှုတှကွေောင့ျ ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျတှရေယ့ျအခစြျတကေ PSGနဲ့ပှဲမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီဘဲဖွဈပါတယျ။
ပှဲအပွီး အငျတာဗြူးမှာ အို့ထရတျဖိုဒျကို ပွနျလာရတာ ပြောျတယျတှေ ဝမျးသာပါတယျတှေ ပွောခဲ့ပမေယ့ျ ကှငျးအတှငျး သူ့ရယ့ျလုပျရကျက စိတျတိုစရာပါ။ နညျးပွဆိုးရှားလျကတော့ ဟာရဲရားတဈယောကျ သူကိုသူ သိမှာပါ ဆိုပွီး ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ ယူနိုကျတကျကနေ PSGကို ဟာရဲယားထကျအရငျ ပွောငျးရှေ့သှားတဲ့ နောငျတောျကွီး ဒီမာရီယာ လမျးစဉျတောငျ လိုကျနတောလား လို့ မေးခှနျးထုတျရမလိုတောငျဖွဈနပေါတယျ။
ဒီမာရီယာကတော့ ယူနိုကျတကျပရိတျသတျတရေယ့ျ အမုနျးကို ခံယူထားသူကွီးပါ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ ဟာရဲယားဟာ ယူနိုကျတကျမှာရှိစဉျက ကွိုးစားပေးဆပျမှုတှကေ အသျအမှတျပွုရမှာဘဲဖွဈပါတယျ။ ဟာရဲယားတဈယောကျ PSGအသငျးမှာ ဒီထကျမက အောငျမွငျပါစေ ဆုတောငျးရငျး။…….
ယူနိုက်တက်အသင်း အတွက် ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ မနက်ခင်းအတွက် သတင်းတိုများ